फ्याक्ट चेक : तातो पानीले नुहाउँदा कोरोना भाइरस मर्छ ? यस्तो छ विशेषज्ञको दावी ! - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ०१, २०७८ समय: २०:४९:००
उनीहरुका अनुसार न त कोरोना भाइरस तातो पानी पिएर वा त्यसबाट नुहाएर मारिन्छ न त यसले कोभिडको रोगलाई निको पार्न सक्छ । कोरोना भाइरसलाई नष्ट गर्नका लागि ६० देखि ७५ डिग्री तापमान चाहिन्छ । अमर उजालासँगको कुराकानीमा, दिल्ली एम्सका डा। आइशी पाल भन्छिन्, ‘मानिसहरूले हल्का मनतातो पानी पिउनु पर्छ । यो घाँटी सफा राख्न र पाचनका लागि लाभकारी मानिन्छ । मनतातो पानीको सेवन गर्नाले घाँटीमा भएको खकार हटाउन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ ।’
अन्त्यमा, अमर उजालाको स्वास्थ्य र फिटनेस श्रेणीमा प्रकाशित सबै लेखहरू डाक्टर, विशेषज्ञ र शैक्षिक संस्थासँगको अन्तरक्रियाको आधारमा तयार पारिएका हुन् । लेखमा उल्लेखित तथ्य र जानकारीहरू अमर उजालाका पेशेवर पत्रकारहरूले जाँच गरेका छन् । सबै लेखहरू यस लेखको तयारीको क्रममा पालना गरिएको छ। सम्बन्धित लेख पाठकको जानकारी र सचेतना बढाउनको लागि तयार गरिएको हो।